Labada Ciyaartoy Ee Ay Chelsea Xili Ciyaareedkan U Dhibtoonaysaa Waxay Kala Yihiin Diego Costa Iyo Nemanja Matic-Ray Wilkins. - Laacib.net
Labada Ciyaartoy Ee Ay Chelsea Xili Ciyaareedkan U Dhibtoonaysaa Waxay Kala Yihiin Diego Costa Iyo Nemanja Matic-Ray Wilkins.
Xidigii hore isla markaana tababare Chelsea ka soo noqday ee Ray Wilkins ayaa aaminsan in Antonio Conte uu marayo dhibta qaladkii uu sameeyay suuqii xagaagii la soo dhaafay kadib markii uu Diego Costa qoshihiisa si layaableh oo naxariis daro ah uga saaray isla markaana ay maamulka Blues iibiyeen Nemanja Matic oo hadda Man United ka tirsan.
Ray Wilkins oo marar hore ka hadlay sida ay Chelsea ugu dhibtoon doonto xili ciyaareedkan ee ayna u heli doonin badalka Costa iyo Matic ayaa markale ku celiyay in kooxdiisii hore ee Chelsea ay guranayso midhihii qaladkii ay samaysay isaga oo xusay in Morata oo kaliyi aanu xalin karin mushkilada weerarka Blues halka Bakayoko uu weerar ku qaaday.
Ray Wilkins ayaa aaminsan in bixitaankii Diego Costa iyo Nemanja Matic oo kaliya ay Chelsea ugu dhibtoonayso horyaalka Premier Leauqe wuxuuna doonayay in Bakayoko uu Chelsea yimaado si uu Matic u caawiyo balse aanu waqti xaadirkan heshiiskiisii ahayn mid lagu faa’iiday.
Ray Wilkins oo la hadlayay talkSPORT ayaa yidhi: ” Iyagu waxay haystaan gooldhaliye weerarka dhexe oo kaliya (Alvaro Morata), Michy Batshuayi isaga ma khusayso, waxay sii daayeen Costa waana mida sida caadanka ah ay qiimaheeda ugu kacday”.
Ray Wilkins oo Matic iyo Bakayoko ka hadlaya ayaa yidhi: “Sidoo kale waxaa la mid ah iibkii Nemanja Matic. Bakayoko wuu iman karay si uu isaga u taageero, laakiin isagu waqti xaadirkan heshiis xaqiiq ah uma muuqdo.Sida ay wax u socdeen suuqii kala iibsiga ayaan xaqiiqdii iyaga caawin”.
Antonio Conte ayaa dhawaan cadho ka muujiyay siyaasada suuqa kala iibsiga maamulka koxdiisa isaga oo ku eedeeyay in aanu haysan koox ciyaartoy badani joogaan oo uu isbadalo ugu sameeyo waqtiga mashquulka badan. Chelsea ayaa soo guuldaraysatay 4 kulan oo ka mid ah 16kii kulan ee ugu horeeyay Premier league.
Laakiin macalinka ree Talyaani ayaa si cad u maraya ciqaabta qaladkii aanu ka fiirsan ee uu Diego Costa fariinta qoraalka ahayd kaga caydhiyay Chelsea ee uu ugu diiday in uu dib ugu soo laabto kooxdiisa taas oo keentay in xidiga ree Spain uu ku biiray Atletico Madrid isaga oo ilaa bisha January sugaya in uu safto maadaama oo ay FIFA ganaaxay Atletico.
Abdorazak 12-12-2017 at 9:50 pm -
Kooxda ayaan u arkaan iney tahay kooxda klya we iska dhicin karta Barcelona iyadoo ay xuntahy sida lagu reebo Barcelona lkn hadana wxn aaminsahay iney reebi doonto